आठ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा अभाव | suryakhabar.com
Home कृषि आठ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा अभाव
on: २४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:०१ In: कृषिTags: No Comments
lzjk'/Ldf afFemf] v]t g'jfsf]6sf] lzjk'/L ufFpkflnsfsf] lnv' vf]nf cf;kf;df afFemf] /x]sf] l;FrfO ;'ljwf k'u]sf] v]tLof]Uo hldg . oxfFsf clwsf+z o'jf j}b]lzs /f]huf/df uPkl5 v]tL nufpg sl7gfO ePsf] :yfgLo atfp5g . tl:a/ M /fdxl/ Gof}kfg], g'jfsf]6, /f;;
जाजरकोट । यहाँका अधिकांश किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका छन् ।
जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहका किसानका खेतबारी सिँचाइ सुविधाको अभावमा वर्षायाममा मात्र खेती हुने गरेको छ । सिँचाइ सुविधा नभएका कारण यहाँका किसान आकाशे पानीको भरमा वर्षायाममा मात्र खेती गर्दै आएका हुन् ।
भिरालो जमीनमा ओसिलो पन नहुँदा सबै लगाएको अन्नबाली सुक्ने भन्दै हिउँदे याममा आफ्नो खेतबारी बाँझै रहने गरेको नलगाड नगरपालिका– ८ का हरिबहादुर खत्रीले बताए ।
केहीले व्यक्तिगत रुपमा पाइप खरिद गरी सिँचाइ गरेपनि अधिकांश किसानका खेतबारी सिँचाइविहीन अवस्थामा रहेको भेरी नगरपालिका–१ का कालीबहादुर पुनले बताए ।
“अर्काको पाइप ल्याएर सिँचाइ गर्दा रु एक हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दा बीउ नै नउम्रिने र हिउँदे याममा जमीन खाली नै राख्ने गरेको पुनको भनाइ छ ।
सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा किसानले बर्खेबाली र हिउँदेबालीका साथै बेमौसमी तरकारीबाली समेत लगाउने गरेको कुशेगाउँपालिका–५ का अमिक थापाले बताए । जमीन पर्याप्त भए पनि सिँचाइको अभावमा बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
“आकाशे पानीको भरमा लगाउँदा वर्षेनी बीउ नै नउठ्ने भएपछि हिउँदे याममा जमीन खाली राख्ने गरेको छु,” उनले भने ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १६ हजार ६९८ हेक्टर जमीनमा खेती गरिन्छ । हिउँदयाममा दुई हजार ९४९ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । वर्षा याममा चार हजार ९९० हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुग्ने गर्छ । दश हजार ४३२ हेक्टर जमीनमा गहुँखेती गरिन्छ भने ७०० हेक्टर जमीनमा जौँखेती गरिँदै आएको छ ।
म्याच फिक्सिङका आरोपीले सफाइ पाए
२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:०१